Somaliland oo eedeyn u jeedisay Madaxweynaha Galmudug & Sirta ka dambaysa Safarkii Hargeysa…. | Garoowe.net	 #ref-menu
Somaliland oo eedeyn u jeedisay Madaxweynaha Galmudug & Sirta ka dambaysa Safarkii Hargeysa….
Waxaa Akhristay 624
Maamulka Soomali-land ayaa ka hadlay wararka ku aadan in Madaxwaynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle(Xaaf) lagu xayiray todobaadkaan garoonka diyaaradaha magaaladda Hargeysa ee Caasimadda Maamulkaas.
Cumar C/llaahi Aadan oo ah Agaasimaha guud ee wasarada Dulista Hawada Maamulka Somaliland ayaa sheegay in waxba ka jiraan ay tahay eeda Madaxweynaha maamulka Galmudug, islamarkaana markii hore diyaarad sharci aan aheyn uu ku tagay Hargeysa ayna si wanaagsan usoo dhaweeyeen.
“Waxaan rabaa inaan saxaafada u cadeeyo hadal ka soo yeeray nin yiri waxaan ahay madaxweynaha Galmudug ee sheegay in lagu xayiray garoonka Hargeysa isagoo arintaasna ku eedeeyey dowlada federaalka Somalia iney ka dambeyso, arintaas waa been aan sal iyo raad toona laheyn, dowlada Somalia kama taliso Somaliand, labo dowladood oo 27 sano kala maqan baynu nahay” ayuu yiri Wasiirka Duulista Hawada Soomaaliland.
Maamulka Somali-land arimaha keenay xayiraadda Madaxwayne Xaaf waxay ku tilmaameen mid ay ka dambaysay Dowlada Dhaxe ee Soomaaliya,islamarkaana Somali-land ay gacmo furan kusoo dhaweysay Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle (Xaaf).
Todobaadkaan Gudihiisa ayay aheyd markii diyaarad ka keentay Madaxweyne Xaaf dalka imaaraadka Carabta lagu xayiray magaaladda Hargeysa, islamarkaana Muddo 5-saac kadib ay caga dhigatay magaaladda Cadaado ee Caasimadda KMG ah ee Maamulka Galmudug.